>နေဝင်ချိန် ဇရာအို၏စိတ်ကူး | ချမ်းလင်းနေ
Filed under: ဝတ္ထုတို — 19 Comments	December 8, 2009
>♥ အချစ်စတင်ပေါက်ဖွားရာမှသည် ခိုင်မာသော သစ္စာဖြင့် ယှက်နွယ်ရင်း တွဲလက်တွေခိုင်မြဲဖို့ဆိုတာ အလွန်တရာမှ ခက်ခဲပါသည်။အကြောင်းအရင်း မယ်မယ်ရရမရှိဘဲ စိတ်သဘောထား ကွဲလွဲသွားကြတဲ့ အတွဲတွေ ကမ္ဘာမြေမှာ ထုနဲ့ထေး။ ကွယ်ဝှက်နေတဲ့ သံယောဇဉ်အမျှင်ကြောင့် ရတုအဆက်ဆက် ဖြတ်သန်းလာခဲ့ကြတဲ့ နေဝင်ခါနီး ဇရာအိုမောင်နှံတွေကလည်း သိန်းနဲ့သန်း။အိုမင်းမှုရဲ့ နောက်ဆက်တွဲရလာဒ်က ဇရာအိုရဲ့ သူငယ်ပြန်စိတ်ကူးလေးတွေပါ။
နှစ်တို့၏ သဘောသည် တရွေ့ရွေ့ကုန်ဆုံး လွင့်ပါးလာသလို သိုးဆောင်းဘိုးဘိုး၏အသက်လဲ တစ်ဖြေးဖြေး ယိုင်နဲ့လာသည်။အသက် ခုနှစ်ဆယ်တန်း သိုးဆောင်းဘိုးဘိုးအတွက် အရာရာသည် အားအင်ချည့်နဲ့လာသည်။သို့ပေမယ်မနက်ဖြန်ကား ဘိုးဘိုးအတွက် ငယ်မူပြန် အောက်မေ့ဖွယ်ရာ ငယ်ဘဝအရိပ်တွေထင်ဟပ်စေလာနိုင်သည်။သားသမီးတွေ အတောင်စုံ၍ သီးခြားခွဲထွက်ကာ နေရစ်ခဲ့သူ သူ့အတွက် ထိုအချင်းအရာသည် နှမြောစရာ နတ္ထိ။ လွမ်းဆွတ်မှု ဗလာအတိပေမယ့် ရွှေရတုကိုသိုးဆောင်းဘွားဘွားနှင့် ပျော်ရွှင်စွာ မဖြတ်သန်းရမှာကိုတော့ စိုးရိမ်မိသည်။ကျန်ရစ်ခဲ့ကြသော သက်ငယ်အနမ်းများ၊ နုနုရွရွ မေတ္တာစကားများ၊ မဟောင်းနွမ်းသော အကြင်နာများ၊ ပျိုမြစ်တဲ့ ဂရုဏာများကို စမြုံပြန်နေသည်။
❇ ” အချစ်ရေ၊ မနက်ဖြန် မင်းနဲ့တို့ ငယ်ငယ်က တွေ့နေကြ ခုံတန်းလေးမှာ တွေ့ရင်း တို့ရွှေရတုကို အမှတ်တရ ဖြတ်သန်းရအောင်ကွာ။အဲဒီမှာ နေခင်းတွေ့ပြီး ညမှ ညစာစားပွဲ လုပ်ကြတာပေါ့။ငါလဲ ငယ်ငယ်ကလို အဝတ်သစ်တွေဝတ်ပြီး စောင့်နေမယ်။ မင်းလဲ ငယ်ငယ်ကလို ပြင်ဆင်ပြီး လာခဲ့လေ။”
“ဒါဆို ကျမက ရှင်နဲ့စတွေခါစ ၁၆နှစ်သမီးတုန်းကလို ပြင်လာရမှာပေါ့။ဟုတ်လား။”
❇ ရွေရတုနေ့ရောက်တော့ သိုးဆောင်းဘိုးဘိုးက သူစီစဉ်ထားတဲ့ အတိုင်း ၁၆နှစ်သားတုန်းကလို ရှိုးစမိုးနှင့် ပြင်ဆင်ပြီး သက္ကလတ်အနွေးထည်ကြီးခြုံကာပန်းခြံထဲသို့ နေ့လည်လောက်မှာ ထွက်လာခဲ့တယ်။ဘွားဘွားကတော့ မိန်းမသဘာဝငယ်ငယ်ကလို ပြင်ဆင်နေရဦးမှာဆိုတော့ နောက်မှ လိုက်လာလိမ့်မည်။ပန်းခြံထဲက ခုံတန်းလေးမှာ ထိုင်ရင်း ရည်းစားဦးဘဝ စတွေ့ခဲ့ကြစဉ်က ပေးနေကြ ပန်းစည်းလေးကို လက်ထဲကိုင်ကာ စိတ်ရှည်စွာ ဘွားဘွားကို မျှော်နေမိသည်။
“မင်း ဘာလို့ ချိန်းထားတဲ့နေရာကို ရောက်မလာတာလဲ။”
ဘွားဘွားက နှုတ်ခမ်းနီရဲရဲများ ဆိုးထားသော နှုတ်ခမ်းစူစူဖြင့် ငယ်တုန်းကလိုချွဲနွဲ့ပြောလိုက်သည်။
“မေမေဆူမှာ စိုးလို့ပါ ကိုကို။” ☺☺☺
19 Comments: သိင်္ဂါကျော်
December 8, 2009 at 12:23 pm	>တစ်သက်တာ ခိုင်မြဲတဲ့ ချစ်ခြင်းတရားများကို လေးစားပါတယ်…
December 8, 2009 at 6:30 pm	>နှေင်းနေဖြစ်ခဲ့လည်း အကြောင်းတွေ သစ်တဲ့ မခွဲ..မြဲခိုင်တဲ့ သစ္စာ တွေ ရင်မှာဝေလို့ကြင်နာလေကြတဲ့ အပင်အိုများရဲ့ ပွင့်လန်းခြင်း ပန်းအလှတွေ အကြောင်းကို ခံစားသွားပါတယ်ပျော်ပါစေခင်ဗျာ
December 8, 2009 at 8:25 pm	>အဖွဲ့နွဲ့လေးတွေကောင်းတယ်အစ်ကိုရာ ဘိုးဘိုးအိမ်အပြင်မှာ တချက်စိတ်ပူသွားတယ်တော်သေးတာပေါ့ ဘွားဘွားက“မေမေဆူမှစိုးလို့ပါ”ဆိုမှ ပြုံးမိတယ်ဗျား)
December 8, 2009 at 10:00 pm	>ကိုချမ်းရေ…ကြည်နူးစရာလေးကို ခံစားမိလိုက်တယ်…။ဖွားဖွားက မေမေဆူမှာစိုးလို့ ဆိုပြီးပြောလိုက်တဲ့နေရာလေးမှာ ကျွန်တော်လည်း ကိုဘကြိုင်လိုပဲ ပြုံးမိတယ်…။ဖတ်ရတာ ကောင်းတယ်…။ခင်မင်တဲ့ဏီလင်းညို
December 8, 2009 at 10:12 pm	>မေမေ ဆူမှာ ဆိုလို့တဲ့လား ဘွားဘွားရယ်း) ဟီး
December 9, 2009 at 12:36 am	>ပြန်ဖေါ်ပြပေးတဲ့ အကြံအစည် ကောင်းတယ်။ စိတ်ပျိုကိုယ်နု ဖြစ်လိမ့်မယ်။ အသက်ကြီးတဲ့ အချိန်မှာ အတူတူနေတဲ့ အဖိုးကြီး အဖွားကြီး စုံတွဲတွေက ခွဲနေသူတွေထက် ပိုပြီး ကျန်းမာကြတယ်လို့ သုတေသနတခုမှာ ဖတ်ဖူးတယ်။
December 9, 2009 at 3:15 am	>ကိုချမ်း ဟိုမှာပြောနေတယ်။ မေမေဆူလိမ်.မယ်တဲ.။🙂
December 9, 2009 at 6:29 am	>အင်းလေ..ဆုံးအောင် မဖတ်ပဲ အဘွားများ တခုခုဖြစ်သလားဆိုပြီး တွေးလိုက်တာ🙂 မေမေ ဆူမှာစိုးလို့နဲ့တွေ့သွားတယ်။ ကောင်းတယ် ကိုချမ်းရေ
December 9, 2009 at 9:21 am	>နောက်ဆုံးတကြောင်းထဲနဲ့ နှစ်သက်စဖွယ် ပြုံးရယ်ရအောင် လုပ်သွားနိင်တယ်..။သဘောကျမိတာ အမှန်ပဲ
December 9, 2009 at 11:04 am	>သိုးဆောင်းဘိုးဘိုးကြီးချမ်းရေမေမေဆူမှာစိုးလို့ ဘလော့မလည်တာ ကြာပီ..ခုမှ လာပြုံးသွားတယ်…မနှင်း
December 9, 2009 at 11:22 am	>ကိုချမ်းရေ …ဖွားဖွားကြီး မရောက်လာလို့ ဘိုးဘိုးကြီး အတွက် စိတ်ပူသွားတာ တော်သေးတာပေါ့ … “မေမေ ဆူမှာ စိုးလို့ ” ဆိုလို့ ….
December 9, 2009 at 11:53 pm	>ကိုချမ်းအဆုံးသတ်လေးမှာ ပြုံးရုံတင်မဟုတ်ဘူး…အသံထွက်ပါရီလိုက်မိတာ…ကြည်နူးစရာလေးနော် … အစ်ကို
December 10, 2009 at 1:46 pm	>အဆုံးသတ်မှာ တစ်ချက်ပြုံးလိုက်မိပေမဲ့တစ်ချိန်ထဲမှာ စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားရတယ်အစ်ကိုရာအတိတ်က အရိပ်လှလှလေးတွေကို ချစ်သူတိုင်းတန်ဖိုးကြီးကြီး ထားနိုင်ကြပါစေဗျာ . . .
December 10, 2009 at 2:01 pm	>ကြည်နူးစွာနဲ့ပြုံးမိပါတယ်ကိုချမ်းရေ။
December 13, 2009 at 12:57 pm	>ုပြုံးမလို့လုပ်ပြီးမှ အဆုံးသတ်ရေးထားတဲ့စာဖတ်ပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားရတယ်…
Reply	ရင်ရဲ့ ရိုးရာ
December 19, 2009 at 1:11 am	>နောက်ဆုံးတစ်ကြောင်းတည်းနဲ့ပြုံးအောင် လုပ်နိုင်ပေမယ့် အောက်က စာကြောင့်မပြုံးဖြစ်တော့ပါ လူတိုင်းမှာခံစားချက်ကိုယ်စီရှိကြသည်ပဲဖြစ်သည်
December 19, 2009 at 5:50 am	>ကြည်နူးလွမ်းဆွတ်ဖွယ်လေးနော်….
February 15, 2010 at 2:18 am	>သူငယ်ချင်း ကျွန်တော်တို့သူငယ်ချင်းနဲ့မိတ်ဆက်ချင်ပါတယ်၊သူငယ်ချင်းရဲ့blogလေးကိုဖတ်ရပါတယ်။သူငယ်ချင်းရဲ့အရေးအသားနဲ့တင်ပြဟန်ကို သဘောကျပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့http://taylaydoeyethmatthan.ning.com/မှာလဲရေးပေးစေချင်ပါတယ်။အကယ်လို့ ရေးရန်အခက်အခဲတစ်စုံတစ်ရာ ရှိလို့ မရေးနိုင်လျှင်လည်း။ ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့စာများကိုRefrenceလုပ်ဖို့ခွင့်ပြုစေချင်ပါတယ်။သူငယ်ချင်းကလောင်အမည်နဲ့သူငယ်ချင်း၏blog Link ကို ပါ Refrence ၏နောက်တွင်ရေးပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။အများဖတ်ရှု့ရန၊်ဗဟုသုတနှင့်ရသ ဖြေဖျော်မှုရရန်အတွက်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်နားလည်စေချင်ပါသည်။update ဖြစ်သောpostများကိုလည်းtaylaymin@gmail.comသို့ပို့ပေးးစေချင်ပါသည်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါသည်ခင်ဗျာ။ တေလေများ
February 15, 2010 at 2:20 am	>သူငယ်ချင်း ကျွန်တော်တို့သူငယ်ချင်းနဲ့မိတ်ဆက်ချင်ပါတယ်၊သူငယ်ချင်းရဲ့blogလေးကိုဖတ်ရပါတယ်။သူငယ်ချင်းရဲ့အရေးအသားနဲ့တင်ပြဟန်ကို သဘောကျပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့http://taylaydoeyethmatthan.ning.com/မှာလဲရေးပေးစေချင်ပါတယ်။အကယ်လို့ ရေးရန်အခက်အခဲတစ်စုံတစ်ရာ ရှိလို့ မရေးနိုင်လျှင်လည်း။ ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့စာများကိုRefrenceလုပ်ဖို့ခွင့်ပြုစေချင်ပါတယ်။သူငယ်ချင်းကလောင်အမည်နဲ့သူငယ်ချင်း၏blog Link ကို ပါ Refrence ၏နောက်တွင်ရေးပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။အများဖတ်ရှု့ရန၊်ဗဟုသုတနှင့်ရသ ဖြေဖျော်မှုရရန်အတွက်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်နားလည်စေချင်ပါသည်။update ဖြစ်သောpostများကိုလည်းtaylaymin@gmail.comသို့ပို့ပေးးစေချင်ပါသည်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါသည်ခင်ဗျာ။ တေလေများ
>အတိုတကာ့ အတိုဆုံးမေတ္တာစာ »